Olona an-tapitrisany ao no mandany vola be amin'ny vokatra efa antitra Nicotinamide Riboside klorida. Na dia fomba fanao voajanahary aza ny fahanterana, dia tsy te ho be taona akory ny olona. Ny vaovao tsara dia ny hoe, misy vokatra marobe any izay mety hanampy betsaka an'izany ary i Nicotinamide Riboside Chloride dia iray amin'izy ireo. Amin'ity lahatsoratra ity dia hifantoka amin'ny vokatra isika.
Homenay anao ny fampahalalana momba azy io, ny fomba fiasa, ny tombany, ny toerana hividianana azy, ary ny toro-hevitra fanampiny hanampiana anao hahazo tsara kokoa.
Inona ny atao hoe Nicotinamide Riboside Chloride?
Andao hanomboka amin'ny fanontaniana miorina indrindra isika. Adino ny anarana lehibe sy manahirana. Nicotinamide Riboside Chloride CAS 23111-00-4 raha ny tena izy dia endrika hafaingan'ny Vitamin B3, izay matetika antsoina hoe niacin. Nicotinamide Riboside Chloride dia mety antsoina koa hoe niagen na antsoina hoe NR. Vantany vao mifangaro ao amin'ny vatana izy io, dia avadika ho izy Nicotinamide adenine dinucleotide na NAD +. Ny NAD + dia iray amin'ireo angovo manan-danja indrindra amin'ny maha-fon'ny olombelona.
Izy io no tompon'andraikitra amin'ny fitrandrahana solika fiasa biolojika lehibe ao anatin'izany ny fiovam-tsakafo amin'ny angovo sy ny fanamafisana ny rafitra fiarovana izay hita ao anatin'ny sela tsirairay. Mety ho tena zava-dehibe amin'ny fanamboarana ny simba simba ny angovo ary mety hisy fiantraikany fanampiny amin'ny fampiroboroboana ny fahanterana. Ny vatana dia afaka mamokatra ny fiadiany NAD + azy mora foana tsy misy fanatsarana. Ny mampalahelo dia izao, rehefa mihantitra ianao, mihena ny isan'ny NAD + vokarin'ny vatana.
Raha ny tena izy, ny olon-dehibe dia hanana ambaratonga ambany amin'ity anneva manan-danja ity raha oharina amin'ny tanora. Eo no lasa zava-dehibe ny famatsiana. Ny fampiasana ny menaka chotide Choride Nicotinamide hanatsarana ny haavon'ny NAD +, indrindra amin'ireo zokiolona, ​​dia mety hanome tombony maro mahasoa.
Voalohany indrindra, ny fihenan'ny haavon'ny NAD + dia nampitahaina amin'ny aretina mitaiza amin'ny vanim-potoana misy ny diabeta, Alzheimer, tsy fahombiazan'ny fo ary fahaverezan'ny fahitana. Misy ihany koa ny porofo manaporofo fa ny fiakarana NAD + dia mety hanohitra ireo fahanterana. Amin'ny farany, ny fampiasana sakafon'ny klorida klorida an'i Nikotinamide dia tsy manampy anao hijery tanora kokoa sy matoky tena kokoa. Manampy koa izany hampihena ny mety hisian ny aretina mitaiza rehefa mihantitra ianao.
Ahoana no fiasan'i Nicotinamide Riboside Chloride?
Ny tanjon'ny Nicotinamide Riboside chloride vs niacin dia fanatsarana ny haavon'ny NAD + ao amin'ny vatana. NR dia vitaminina izay hita ao amin'ny lalan-kely bitika amin'ny sakafontsika mahazatra. Raha vantany vao zatra ny akora dia avadika amin'ny alàlan'ny dingana metabolika mahazatra amin'ny NAD +. Ny mahatonga an'i NR ho safidy tsara ho an'ny olona mitady hampiakatra ny haavon'ny NAD + dia ny zava-misy fa tena bioavailable izany.
Araka ny efa nomarihintsika tetsy ambony, ny NR dia endrika Vitamin B3. Betsaka ny loharanon-tsakafo an-tapitrisany afaka manolotra Vitamin B3. Na izany aza, ny tahan'ny tsimok'aretina Nicotinamide Riboside Chloride dia haingana kokoa raha oharina amin'ireo endrika B3 hafa ao amin'ny sakafo. Izany dia mahatonga azy ho iray maoderina famerenana azo itokisana sy mahomby amin'ny famoahana NAD + ao amin'ny vatan'olombelona.
Nicotinamide Riboside Chloride tombony / vokatry
Ny tombony azo avy amin'ny Nicotinamide Riboside Chloride dia azo jerena ihany momba ny anjara asan'ny NAD + ao amin'ny vatana.
Izany dia satria ny fanampian'ny NR dia hampiakatra ny haavon'ny NAD + ary ny vokatr'ity coenzyme manan-danja ity dia hanolotra ity manaraka ity Tombontsoa azo avy amin'ny Nicotinamide Riboside Chloride:
1. Fahantrana tsara
Ny fitomboan'ny famokarana NAD + ao amin'ny vatana dia mety hampiteraka ny famokarana angovo sasany izay mety hanampy hanatsara ny fahanterana sy salama tsara. Amin'ny fandinam-biby, ny coenzyme dia nahavita nanetsika ny famokarana angovo iray antsoina hoe sirtuins.
Ny Sirtuins dia niseho ho fanatsarana ny fahavelomana sy ny fahasalamana ankapobeny amin'ny taranja fitsapana biby mandritra ny fanadihadiana klinika. Ny fandinihana hafa dia mampiseho ihany koa fa afaka manampy amin'ny fampitomboana ny fihenjanana amin'ny olombelona ny Sirtuins ary hanamboatra ny ADN simba.
2. Manatsara ny mekanika miaro amin'ny sela ao amin'ny atidoha
Ny NAD + dia afaka miaro ny sela amin'ny atidoha amin'ny fiparitahana tsy miangatra, indrindra amin'ny fahanterana. Ny fandinihana sasany dia mampiseho fa ny NAD + dia mety hifehy ny famokarana proteinina antsoina hoe PGC-1-alpha. Ny proteinina dia tena ilaina tokoa amin'ny fiarovana ny sela amin'ny fihenan-drà amin'ny oxidative. Mety hampivoatra sy manamboatra ny fiasa mitochondrial ao amin'ny sela atidoha izy io, mitondra amin'ny fahasalamana ara-pahasalamana tsara kokoa.
Misy ihany koa fikarohana fikarohana amina am-polony mampifandray ny adin-tsaina amin'ny oxidative ary simba mitochondrial simba ao amin'ny sela misy atidoha misy aretin-tsaina mifandraika amin'ny taona toy ny Alzheimer, Parkinson's sy ny hafa. Ny hetsika nataon'ny NAD + amin'ny fampihenana ireo dingana ireo dia mety hampihena ny loza ateraky ny Alzheimer ary ny aretim-pankasitrahana hafa.
Ny fahombiazan'ny NAD + amin'ity dia tena avo be. Tao amin'ny fandalinana biby sasany izay nitondran'ny totozy tamin'i Alzheimer tamin'i Nicotinamide Riboside Chloride, dia nitombo ny haavon'ny PGC-1-alpha ao amin'ny atidoha amin'ny 50 ka hatramin'ny 70%. Tamin'ny fiafaran'ny fandinihana, ny totozy voatsabo tamin'ny NR dia nanatsara ny fampivoarana asa lehibe.
3. Nicotinamide Riboside Chloride Mety hanampy amin'ny fo olana
Ny risika ny tsy fahombiazan'ny fo dia mitombo be amin'ny fahanterana. Ny tsy fahampiana fo ihany koa dia olana iraisana iray fa raha ny marina dia io no antony voalohany mahatonga ny fahafatesana eran-tany. Ny fahasalaman'ny fo amin'ny ankapobeny dia miankina amin'ny antony maro na dia ao anatin'izany ny sakafo sy ny fanatanjahan-tena mety. Fa misy zavatra sasany mety hampihena ny loza. Ny famokarana betsaka ny NAD + dia iray amin'ireo zavatra ireo.
Ny fitsapana natao tamin'ny biby dia nahita fa ny fampitomboana ny NAD + dia nanampy tamin'ny fanovana fiovana mety hampidi-doza amin'ny aretin'ny ra vokatry ny fahanterana. Tamin'ny fandinihana nataon'ny olombelona sasany, ny haavon'ny NAD + dia nitarika ny fampihenana ny hantsana tao aorta. Ny NAD + dia voalaza ihany koa fa mety hampihena ny mety hisian'ny fihenan-dra systolika.
Midika izany fotsiny fa misy ny mety hitranga amin'ny fampiasana Nicotinamide Riboside Chloride ho fanafody mety hampihena ny mety hisian'ny aretim-po. Na izany aza, mbola mila ilaina ny fikarohana olombelona fanampiny hahalala bebe kokoa ny mety ho avona.
Ho fanampin'ireo tombontsoa ireo dia mety manampy koa ny Nicotinamide Riboside chloride levitra. Izany dia satria ny haavon'ny NAD + dia mety hampitombo ny tahan'ny metabolism ao amin'ny vatana. Ny haavon'ny NAD + avo lenta dia manakana ny fahasimban'ny ADN sy ny adin-tsaina amin'ny oxidative, lafin-javatra roa nampifandraisina amin'ny homamiadana. Ny coenzyme koa dia mety hisy fiantraikany tsara amin'ny fampiroboroboana ny fahanterana hozatra ara-pahasalamana.
Ahoana ny fampiasana an'i Nicotinamide Riboside Chloride
Nicotinamide Riboside Chloride dia amidy matetika amin'ny niagen. Ny vokatra dia amidy amin'ny kapôzika amin'ny Internet ary voatsindrona amin'ny fampiasana ny vava.
Na dia ampahany betsaka amin'ny vokatra niagen aza dia misy ny Nicotinamide Riboside Chloride, ny sasany koa dia mety ahitana endriny fanampiny anisan'izany ny polyphenol na Pterostilbene. Matetika ny mpanamboatra dia manome soso-kevitra ny klôneur Nicotinamide Riboside eo anelanelan'ny 250 mg sy 300 mg isan'andro. Izy io dia mitovy amin'ny kapisopa roa amin'ny vokatra isan'andro.
Nicotinamide Riboside Chloride vs. Nicotinamide Riboside (NR)
Ny hany mampiavaka ireo singa roa ireo dia ny fandrafetana. Na izany aza, manana rafitra miasa toa azy izy ireo. Ny asan'i Nicotinamide Riboside Chloride sy Nicotinamide Riboside dia ny fanamafisana ny famokarana NAD + ao amin'ny vatana. Ireo roa ireo ihany koa dia endrika hafaingan'ny Vitamin B3.
Nicotinamide Riboside Chloride vs. Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Ny adi-hevitra momba an'i Nicotinamide Riboside klorida vs NMN tsy lehibe izany. Ny Nicotinamide Mononukleotida (NMN), toa an'i Nicotinamide Riboside Chloride, dia asan'ny niacin. Ireo akora roa ireo dia mitovy amin'ny fomba fiasan'izy ireo. Mitroka sy miova ho NAD + izy ireo rehefa miditra amin'ny vatan'olombelona. Ankoatr'izay, ireo akora roa ireo dia namboarina ihany koa avy amin'ny fitambaran'ny taolan-taolana sy Nicotinamide.
Inona avy ny sakafo misy an'i Nikotinamide Riboside?
Ny ankamaroan'ny sakafontsika dia misy ny Nicotinamide Riboside. Na izany aza, ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​ny sakafo antonony, miaraka amin'ny otrikaina B3, dia tokony ho ampy hanomezana ny fandraisana an'i Nicotinamide Riboside.
Ireto misy sakafo maromaro mety manampy ity:
Ny ronono Dairy- Ny ronono ombivavy dia entina miaraka amin'ny Riboside Nicotinamide be dia be.
Fish- Mety hahazo NR amin'ny trondro koa ianao. Tuna, sardinina ary salmon dia samy manana ny haavon'ny Nicotinamide Riboside avokoa.
Beer- Mahagaga fa ny labiera dia mety hanampy anao amin'ny fanampiana Nicotinamide Riboside. Izany dia satria ny labiera dia manana masirasira ho iray amin'ireo mpiorina lehibe ao aminy ary ny masirasira dia fantatra fa avo dia avo amin'ny NR.
Akoho- Ny fihinanana akoho dia mety hampisondrotra ny tahan'ny NR ao amin'ny vatanao koa. Akoho amam-borona, nendasina, nendasina, na nendasina, dia nahatratra 9.1 miligraman'ny Nicotinamide Riboside.
Legioma maitso- Soso-kevitra ihany koa ny legioma maintso. Izy ireo dia feno vitamina betsaka, ao anatin'izany ny B3 manan-danja indrindra izay ho zava-dehibe amin'ny fampifangaroana ny NAD + amin'ny vatanao.
masirasira - Farany, raha tsy azonao atao ny mahazo Nicotinamide Riboside amin'ny labiera, dia mety te-hihinana ilay masirasira ianao. Ny masirasira dia avo be ao amin'ny Nicotinamide Riboside ary tokony ampidirina ao amin'ny sakafonao.
Nicotinamide Riboside chloride foitra dia tena be antoka azo ampiasaina fa tahaka ny vokatra rehetra, dia misy fiatraikany maro mety ho tokony ho fantatrao. Nandritra ny fandinihan'olombelona sasany, ny foto-panadinana dia nomena teo anelanelan'ny miligram 1000 sy 2000 miligram an'ny Nicotinamide Riboside Chloride ary tsy nahita fiantraikany ratsy akory izany. Hatreto, ireo mpanamboatra ny Nicotinamide Riboside Chloride dia manome soso-kevitra eo anelanelan'ny 200 mg sy 300 mgs mandritra ny andro.
Na eo aza ity firaketana azo antoka ity, mety hanana fiantraikany vitsivitsy iany ao an-tsaina ny Nicotinamide Riboside Chloride. Voalohany, nisy olona nitatitra fa mahatsapa nauseated rehefa nampiasa ilay vokatra. Amin'ny tranga hafa, marary ny aretin-doha sy aretin'andoha vokatry ny Nicotinamide Riboside Chloride. Tsy dia mahazatra ihany koa ny miaina olana momba ny fandevonan-kanina anisan'izany ny tsy fahampiana amin'ny fivontosana sy ny fivalanana.
Na izany aza, ny hamafin'ny tsimok'aretina Nicotinamide Riboside klorida dia samy hafa amin'ny olona tsirairay. Ny olona sasany dia tsy mbola mahatsapa izany vokatra izany mihitsy. Raha misy fanafody hafa ianao, dia miresaha amin'ny dokotera aloha alohan'ny hampiasana ny Nicotinamide Riboside Chloride.
Nicotinamide Riboside Chloride vidiana an-tserasera
Raha tsapanao fa afaka manome tombony mahasoa ho an'ny fahasalamanao amin'ny ankapobeny ny Nicotinamide Riboside Chloride, dia faly ianao raha fantatrao fa misy ny vokatra any amin'ny fivarotana maro. Azonao atao ihany koa mividy amin'ny Internet na ivelany. Nicotinamide Riboside Chloride dia amidy betsaka amin'ny hoe niacin. Tonga ao anaty capsules ihany koa.
Na izany aza, azonao atao ny maka ny fotoananao rehefa mitady mpividy ianao. Na dia betsaka aza ny fivarotana handeha hanolotra anao vokatra kalitao, dia mbola misy tranonkala sandoka maro be maniry maniry ny handrebireby anao.
Ireto misy torohevitra vitsivitsy hanampy anao hahita mpivarotra tena izy:
Zahao ny hevitra. Hevitra iray foana ny mahafantatra izay lazain'ny mpanjifa hafa momba ny mpivarotra alohan'ny mividiananao.
Hamarino ihany koa ny vidiny. Na dia Nividy ny Nicotinamide Riboside Chloride tsy lafo loatra, tsy mora koa izany. Ireo mpivarotra mivarotra ny vokatra amin'ny vidiny mora dia tsy tokony hohalavirina.
Mety ho tsara ihany koa ny mangataka fangatahana mivantana. Raha tokony hitsambikina fotsiny an-tserasera ianao ary miezaka mitady an'i Nicotinamide Riboside Chloride, dia miresaha amin'ny olona nividy ireo vokatra ireo taloha ary jereo raha afaka mampifandray anao amin'ny mpivarotra tena izy izy ireo. Ny dokotera koa dia mety manana hevitra sasany hoe aiza no hanombohana ary fampahalalana bebe kokoa amin'ny Nicotinamide Riboside chloride vs NADH.
Nicotinamide Riboside Chloride dia be mpitia indrindra amin'ny anti-antitra. Afaka manampy ireo fiverenana amin'ny fahanterana ireo ary hitandrina anao amin'ny fahasalamana. Ny torolàlana etsy ambony dia tokony hanampy anao hahita vokatra tena mivoaka eo.
1.Inona ny Chotida na Nicotinamide Riboside?
2.Ahoana no fiasan'ny klôroida Nicotinamide Riboside?
3.Nicotinamide Riboside Chloride tombontsoa / vokany
4.Ahoana ny fampiasana Nicotinamide Riboside Chloride
5. Nicotinamide Riboside Chloride vs. Nicotinamide Riboside (NR)
6. Nicotinamide Riboside Chloride vs. Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
7. Inona avy ireo sakafo misy Riboside Nicotinamide?
8.Tsy milamina ve i Nicotinamide Riboside Chloride?
9.Nicotinamide Riboside Chloride vidiana an-tserasera